(SHEEKO CAJIIB AH ) INAN HABOW AH- SHEEKO GAABAN W/Q ABUKRA AL BADRI
(SHEEKO CAJIIB AH ) INAN HABOW AH- SHEEKO GAABAN W/Q ABUKRA AL BADRI - XOG MUHIIM AH | WARAR SUGAN |
| Thursday, Nov 17, 2016 |
Najma aad ayey baarri ugu tahay waalidkeed, walaalaheedna way jecel yihiin oo markii ay wiilasha aabahood wax ay ka doonayaan ka waayaan ama uu ku gacanseyro Najmo ayey u diraan si ay aabaha ugala hadasho, markaas ayuu odeygu ogolaadaa oo waxaa uu yiraahdaa “Wixii Najma ay iga soo doonto waan ogolahay mar walba”
Najma hooyadeed habeen walba waa ay u duceysaa marka ay aragto sida ay caruurta uga fikireyso iyo sida ay hawsha guriga uga qabato, waxaa ay ugu duceysaa “Ubad baarri ah ayaad tahaye awlaad baarri ah Allow ku sii oo dadka oo dhan baarri kaaga dhig” aabaheedna sidoo kale ayuu aad ugu duceeyaa mar walba, qof walbana waa ay u duceysaa Najma.
Markii ay reerkii maamulkooda subaxnimo isku dubariday ayey hooyadeed ka codsatay in ay fasaxdo si ay u baxdo, hooyadiina waxaa ay ugu duceysay “Maandhaay Ilaah ha ku dhawree is diyaari si aad eedo iyo ayeeyo aado, dhankeyga fasax baad ka tahay”
Aabaheed iyo hooyadeed ayey soo macsalaamaysay markii ay guriga ka sii baxeysay, walaalkeed oo kula kaftamay “Abbaayo maanta waad nuureysaaye ma ku raacaa?” waxaa ay ugu jawaabtay “Maya, Balan baan leeyahay aboowe” Dhoola cadeyna way u raacisay, isaguna wuxuu ugu jawaab celiyey “Guul baan kuu rajeeyey”
Markii ay nafta u yaabtay, ayey ku qaylisay “Idaaya, war idaaya” laakiin yaa ka maqlay oo ka dhegeystay warkaas. Inta ay gacanteeda si hal haleel ah uga filiqday mid Kirishbooyadii aqlaaqda darnaa ah ayey mar qura ciid haabatay oo ku seyrtay Kirishbooyadii oo dhan. Kaddibna mid odey ah oo isna kirishbooy ah, balse timihiisa oo ciro ay ka muuqato mooyee aan akhlaaq badan laheyn ayay gaarigii uu raraayey waydiisay, isagana gabadha ma uusan waydiin halka ay u socoto e waxaa uu saaray gaari u socday Xamarweyne.
“War kuwan waalid ma dhalin miyaa oo lama soo abaabin?” ayey qalbiga iska waydiisay, “Haddii la dhalay maxaa iyagoo waalan jidka loogu soo wada daayey?” ayey haddana is waydiisay. “Koleyba qof aan la dhalin ma jiree malaha iyagaa tuugo caasi waalideyn ah” ayey isku qancisay.
Kirishoboygii cirrada lahaa, balse afkiisa ay cayda iyo xumaanta ka qubaneysay ayaa dadkii rakaabka ahaa ku yiri “Gaariga halkan ayuu ku eg yahay ee ka daata”
“Ka daata aah!” ayey niyada iska waydiisay, waxaa ay moodaa in daadashadu tahay inuu qof walbaa dhulka isku tuuro, hase yeeshee Kirishbooyadu waa hal qabsigooda waxaa ayna ula jeedaan “ka soo dega”
Markii ay gaarigii ka degatay ayey aragtay in ay dhex taagan tahay saro dhaadheer oo aysan weligeed arkin. waxaa ay Kirishbooygii waydiisay “Waa halkee meeshan?” “Xamarweyne” ayuu ugu jawaabay, wuxuuna ku booday gaarigii oo waa uu dhaqaaqay isaga oo aan caawin gabadhii.
“waxaa ay isagoo sii baxaya waydiisay “Halkee laga raacaa gawaarida Xamar Bile?” Wuxuu gacanta ugu tilmaamay meel ay safnaayeen gawaari loo raaco dhanka Sanca iyo Kaaraan, iyadiina meeshii ayey abbaartay.
Iyadana in korkeeda qof ajnabi ka ahi uu taabto waxaa ay la tahay dhimasho oo kale, laakiin cidna lama tashaneyso oo waa lagu soo shamuumaa uun, “Wa shamsi ayey ku qaadeen” gabadhii yareyd.
Markii gaarigii la soo raray u dhaqaaqay dhankii Sanca ayey niyada iska waydiisay in ay taleefoonkeedii la soo baxdo oo aabaheed wacdo, hadana way cabsatay oo waxaa ay is tiri “Ammaa lagaa qaataa” sidii ayey isaga dhaaftay.
Markii Isgoyskii Sanca la soo gaaray ayuu Kirishbooygii ku yiri gaarigan halkan ayuu ku eg yahay, waxaa ay waydiisay halkan waa halkee, wuxuu ugu jawaabay “Sanca” Sanca miyey garaneysaa weligeed ma aysan maqlin meel Sanca la dhaho oo Muqdisho ka mid ah in ay imaato daaye.
Markii ay dadkii ku yiraahdeen waan idin gudbineynaa, ayaa odeygii faqooda maqlaayey waxaa uu ku yiri “Ciddii aad doontaan gudbiya gabadhan yar idin raaci meyso.”
Markii hadaladaas la is dhaafsanayey Najma wadnaha ayaa qaboobay, korkeeda oo dhan dhidid ayaa ka soo daatay, waxaa ay is waydiisay “Mana habaarneyne maanta sidan maxaa ay kuu aheyd” waa ay ilmeysay, kaddibna inta taagnaan waysay ayey dhulka fadhiisatay, oohin ayey bilowday.
Dhalinyaradii iyo odeygii hadallo kulul ayey is dhaafsadeen waxaa uuna ugu hanjabay in uu taliska ciidanka ku dacweyn doono, weliba si aan gambasho laheyn ayaa uu ugu yiri “Waan idin dhegeysanaayey marka aad inantan yar ee miskiinta ah aad u tashaneyseen, ALLAAH ayaan ku dhaartaye waan idin leynayaa haddii aadan meesha ka tagine”
Islaantii waxaa ay Najma waydiisay maxaad u oyneysaa maandhaay, maxaa kaa halaabay anigaa ku caawinayee. Najma neef weyn ayaa ka soo fuqday markii ay islaantii tiri “aniga ayaa ku caawinayo”.
Mararka qaar waxaa lagu shakiyey waa gabare armey masaafo wiil u raacday, sidoo kale ayaa laga shakiyey in ay dano gaar ahaaneed aaday, laakiin aabaheed oo aad ugu kalsoonaa waxaa uu ku adkeystay “Gabadheyda Najma wax baa ka si ah mooyee ima khiyaameyneyso”.
Islaantii waxaa ay Najmo waydiisay “Halkeed degan tihiin?” Najma waxaa ay ku jawaabtay “Macruuf ayaan degan nahay”
Markii guriga ay yimaadeen oo ay weli ciil la oyneyso ayay hooyadeed u soo bixisay Taleefoonkii, Najma aragtida taleefoonkii ayey ku sastay oo iyadoo oyneysay ayey bilowday in ay dhoola cadeyso. Sidoo kale waxaa afkeeda ka soo boodday “CAKU GAARI CAASI AH IYO WIIL WADA!” Oraahdaas oo aabaheed iyo walaalaheed ka yaabisay, kaddibna waxaa ay uga sheekeysay wax allaale wixii dhib ahaa ee ku dhacay oo ah sida sheekada kore ku qoran.
Anigana waxaan isaga abaal hayaa in seddax sano kaddib aan sheekadii idin soo daabacay, idinkana waxaan idinkaga mahad celinayaa aqrinta wanaagsan iyo fikradihiina.
(DHAGAYSO WAR DAG DAG AH ) Guddiga Nabad raadinta ee Gaalkacyo Puntland oo jawaab adag ka bixiyey hadal ka soo baxay Galmudug.
(DHAGAYSO) Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland oo markii ugu horeysay ka hadlay inuu san jirin khilaaf ka dhexeeya isaga iyo madaxweyne Gaas